November 29, 2020 - Achawlaymyar
November 29, 2020 by Achawlaymyar
မိန်းကလေး တွေက ဒီ(၅)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေး မျိုးကို နှစ်ဆပိုချစ် ကြပါတယ် သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ကို ရင်ခုန်သံ မြန်လာစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ?ယခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၅) ချက်က အရမ်း Romantic မဆန်ပေမယ့် သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို နှစ်ဆပိုချစ်လာမှာပါ…။ ၁။ သူမကို အမြဲ ကာကွယ်ပေးခြင်း… သူမ နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရုတ်တရက် နေအရမ်းပူလာရင် သင် က ထီးမိုးပေးတာ၊ သူမ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ တံခါးမှန်သမျှကို သင်က ကြိုဖွင့်ထားပေးတာ၊ သူမ နဲ့ ကားအတူစီးလာရင်လည်း ကားတံခါးကြိုဖွင့် ထားပေးတာ၊ အစရှိတဲ့အချက်တွေဟာ သေးသေးမွှားမွှားလို့ ထင်ရပေမယ့် … Read more
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့လေးမှာ တစ်သောင်းတန်အထပ်လိုက်ကို ပံ့သကူပစ်ပြီးကုသိုလ်ယူမယ့် နန်းဆုရတီစိုး
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့လေးမှာ တစ်သောင်းတန်အထပ်လိုက်ကို ပံ့သကူပစ်ပြီးကုသိုလ်ယူမယ့် နန်းဆုရတီစိုး နန်းဆန်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်လေးနန်းဆုရတီစိုးကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာသာမက ဂီတနယ်ပယ်မှာလည်းအောင်မြင်နေသူတယောက်ပါ။ အဆွေးသီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ရင်ထဲကိုရောက်အောင်သီဆိုနိုင်ပြီး ဖော်ရွှင်တဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့် နန်းဆုကိုချစ်ခင်သူတွေပိုများနေတာပါ။နန်းဆုကတော့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာ ကုသိုလ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပါ။ နန်းဆုကတော့တန်ဆောင်းမုန်းလပြည့်နေ့မှာ ပံ့သကူလှူမယ့်အကြောင်းကိုတန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ပံ့သကူအလှူလေးတွေလှူဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြပုံလေးတွေပါချစ်စရာအစဉ်အလာအလေ့အကျင့်လေးမို့ နန်းဆုလည်း ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာလိုက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပံ့သကူအလှူလေးတွေရရှိသူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင့်။နန်းဆုတို့ပံသကူပစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာနဲ့လိုက်ပစ်တဲ့video လေးကိုညကျတင်ပေးမယ်နော်ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးတန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေအပူအပင်တွေကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင့်ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်သာင်းဆန်အထပ်လိုက်ကိုလှူဒါန်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ရုပ်ချောသလော စေတနာသဒ္ဓါတရားထက်သန်လွန်းသူလေးပါပဲနော်။ Source – Nan Su Yati Soe
ဗန်းမော်ဈေးထဲ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ စာအိတ်တွေလိုက်ချနေလို့ ဘာလဲဆိုပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့……
ဗန်းမော်ဈေးထဲ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ စာအိတ်တွေလိုက်ချနေလို့ ဘာလဲဆိုပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့လေးမှာ ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ ဗန်းမော်က အမည်မသိ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်လေးအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိုဗစ်ကာလဟာ ကာလကြာရှည် လော့ဒ်ဒေါင်းပိတ်ထားသည်ကို ပရိသတ်ကြီးလည်း အသိပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတော်တော်များများ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ တစ်ရက်လုပ်မှတစ်ရက်စားရတဲ့ ချို့တဲ့သူတွေ ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက် နေကြရသူတွေအတွက် အရမ်းကို ပင်ပန်းခက်ခဲလွန်းတဲ့ ကာလကြီးပါ။ လှူဒါန်းသူတွေကလည်း လှူကြပေမယ့် တချို့ရပ်ရွာတွေက အတော်ကို ဝေးလံခေါင်ပါးလွန်းပါတယ် ။ ဒါလေးကတော့ ဗန်းမော်မြို့ကထူးခြားဖြစ်စဉ်လေး တစ်ခုပါ။ မြေနုဈေးမှာ ဈေးရောင်းသူ ဝယ်သူ Mask တပ်မတပ် ကြည့်ရှု့နေစဉ်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လူတစ်ယောက် စာအိတ်တွေ လိုက်ချနေတာ မြင်တော့ ရုတ်တရက် တွေးမိလိုက်တာ ဘာတိုင်သလည်းပေါ့။ ပြေးကောက်ပြီး ဖွင့်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ အထဲမှာ … Read more
သကွားတဈမြိုးတညျးကို အသုံးပွုပွီး မကျြနှာခြေးခြှတျနညျး….
သကွားတဈမြိုးတညျးကို အသုံးပွုပွီး မကျြနှာခြေးခြှတျနညျး သကွားနဲ့ မကျြနှာကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျရအောငျ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာကို အဆငျ့ဆငျ့မြှဝပေေးသှားမယျနျော။ ၁။ အရငျဆုံး မကျြနှာသဈဆပျပွာ၊ ရနှေေးနဲ့ မကျြနှာကို စငျအောငျသဈလိုကျပါ။ ၂။ သကွား လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးကို လကျဖဝါးထဲ လောငျးထညျ့လိုကျပါ။ ၃။ လကျခြောငျးလေးတှကေို အသုံးပွုပွီး မကျြနှာပျေါမှာ ပှတျလိမျးပေးလိုကျပါ။ ၄။ အရမျးမပှတျပဲ ညငျသာစှာပှတျပေးရပါမယျ။ ၅။ ရနှေေးနညျးနညျး ထညျ့ပွီး ပှတျနိုငျပါတယျ။ ရနှေေးအမြားကွီးမထညျ့ရဘူးနျော။ သကွားအရညျပြျောသှားမှာစိုးလို့ပါ။ ၆။ ၁၅ မိနဈကနေ မိနဈ ၂၀ လောကျထားမယျ။ ၇။ ပွီးရငျ ရအေေးအေးနဲ့ မကျြနှာသဈခလြိုကျမယျ။ ၈။ ပွီးရငျတော့ တဘကျနဲ့ ခွောကျအောငျ ဖှဖှလေးသုတျလိုကျမယျ။ ၉။ ပွီးရငျ ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ Moisturizer တမြိုးမြိုး လိမျးပေးထားလိုကျပါမယျ။ … Read more
မနကျတိုငျးအသုံးပွုနတေဲ့ သှားတိုကျဆေးရဲ့ အစှမျးမြား..
မနကျတိုငျး အသုံးပွုနတေဲ့ သှားတိုကျဆေးရဲ့ အစှမျးမြား သိထားသငျ့တယျ ထငျလို့ပါ။ သှားတိုကျဆေးကို မနကျတိုငျ သှားသနျ့ရှငျးတောကျပွောငျဖို့နဲ့ ခံတှငျးနံ့ ကငျးစငျဖို့အတှကျပဲ အသုံးပွုလို့ရတာ မဟုတျဖူးနျော… သှားတိုကျဆေးနဲ့ အခွားဖွရှေငျးလို့ရမယျ့ နညျးလမျးအခြို့လညျး ရှိပါသေးတယျနျော။ ( 1 )- အမဲစကျနဲ့ အမဲကှကျပွသာနာမြား သှားတိုကျဆေး ၁ ဇှနျး နှငျ့ သံပုရာရညျ ၂ စကျ တို့ကို ရောမှပွေီး ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာရှိတဲ့ အမဲစကျနှငျ့ အမဲကှကျမြားပျေါသို့ ပှတျလိမျးပေးပွီး ၁၀ မိနဈ ( သို့ ) ၁၅ မိနဈခနျ့ ထားပါ။ ပွီးလြှငျ ရဆေေးခလြိုကျပါဗြာ ။ (2)- ဝကျခွံပွသာနာမြား သှားတိုကျဆေးကို နားကွပျတံ သို့ ဂှမျးတံလေးနဲ့ ယူပွီး … Read more
ဆံပငျထူ ခငျြတဲ့သူတှေ၊ မဲနကျခငျြသူတှေ ၊သနျခငျြသူတှေ ၊ ဆံပငျအကြှတျသကျသာခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ…..
ဆံပငျ အတှကျ ခကျြအုနျးဆီ၂ဝသား ၊ထောလပကျရှကျရယျ ၊အပုတျခံထားတဲလကျဖကျရယျ ဆံပငျထူခငျြတဲ့သူတှေ၊ မဲနကျခငျြသူတှေ ၊သနျခငျြသူတှေ ၊ဆံပငျအကြှတျသကျသာခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အိမျတှငျးပစ်စညျးလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့ဆံပငျကို ဂရုစိုကျလို့ရပါတယျရှငျ. ခကျြအုနျးဆီလေးမှေးလာရငျ အပုတျခံထားတဲ့လကျဖကျလေးတှထေညျ့ပါ ။ လကျဖကျညှနျ့လေးတှရေဲတတျပွီး တူးသှားတတျတဲ့အတှကျ မီးအရှိနျလေးလြော့ပွီး စိတျရှညျရှညျတော့ခကျြရပါတယျ.. အုနျးဆီနံ့ကော လကျဖကျနံ့ကလေးကော မှေးလာပွီဆိုမှ ထောလပကျရှကျလေးတှကေိုထညျ့ပေးပါ။ ထောလပကျရှကျလေးတှပေါ နှမျးသှားပွီဆိုရငျ ခလြို့ရပါပွီ.အအေးခံပွီး ကိုယျခေါငျးလြျောမယျ့ရကျတှမော မလြျောခငျ၂နာရီလောကျကွိုပွီး ဆံပငျအနှံ လိမျးပွီးနှိပျထားပါ။ ပီးရငျခေါငျးလြျောနကေပြုံစံမြိုးနဲ့ လြျောလို့ရပါပွီ ရှငျ့… ဆနျဆေးရညျ ထပျနှပျရငျတော့ ပိုကောငျးပါတယျရှငျ ။ကိုယျကတော့ဆနျဆေးရညျနဲ့ပါ နောကျတကွိမျထပျနှပျပါတယျရှငျ ကိုယျ့အတှကျကတော့တဈခှကျကို ခေါငျးလြျောကွိမျရေ ၄ခေါကျစာ ပါ..တလကို ၃ခေါကျလောကျခကျြရတယျ ဆံပငျသားအလှအပကို အထူးဂရုစိုကျခငျြတဲ့ မိနျးကလေးတှအေတှကျ ကိုယျလုပျဖွဈတဲ့နညျးလမျးကို ဝမြှေပေးတာပါ ခရဈဒဈ ======== Zawgyi, ဆံပင် အတွက် ချက်အုန်းဆီ၂၀သား ၊ထောလပက်ရွက်ရယ် … Read more
လပွညျ့နမှေ့ာပဲ ပွုလုပျလိုရတဲ့ ဝိဇ်ဇာဝပွော အလှူတျော .
တဈနတှေ့ငျ ကြှနျုပျသညျ အိမျမှ နာရီဝကျခနျ့စောပွီး ထှကျလာကာ ဆူးလဘေုရားသို့တကျသှားပွီး ဘုရား ရှိခိုးလေ၏။ ပွနျဆငျးခါနီးတှငျ အသကျ ၇၀ နှဈနီးပါး ခနျ့ရှိပွီဟုထငျရသော ယောဂီအညိုရောငျဝတျဆငျ ထား သညျ့ အဘှားကွီးတဈဦးသညျ ကြှနျုပျအနီးသို့ ရောကျ လာပွီး – ““လူလေးရေ … အမကေို့ တဈခု ကူညီပါ ကှယျ …”” ဟု ပွောလရော ကြှနျုပျကလညျး –““ဘာမြား ကူညီရမှာပါလဲခငျဗြ ..၊ ပိုကျဆံ အလှူခံမှာဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောက တောငျ ပွနျပွီး အလှူခံရလိမျ့မယျအမရေေ …။ ကြှနျတျော့ဟာ ကြှနျတျောတောငျ ထမငျးက ၀ခငျြ တာမဟုတျဘူး”” ဟု ပွနျပွောလိုကျမိလေ၏။ အဘှားကွီးက သှား မရှိတော့သောပါးမြား ခှကျဝငျ သညျအထိ ပွုံးလေ၏။ ထို့နောကျတှငျမှ … Read more